Dɛn Ne Bible No?—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ | Bible Kyerɛkyerɛ
Bible—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ
Akwan bɛn so na Bible da nsow wɔ nhoma foforo biara ho?
Ɔkwan bɛn so na Bible betumi aboa wo ma woagyina wo haw ahorow ano?
Dɛn nti na wubetumi agye Bible mu nkɔmhyɛ ahorow adi?
1, 2. Akwan bɛn so na Bible yɛ Onyankopɔn akyɛde a ɛma anigye?
WOBƐKAE bere bi a wo nsa kaa akyɛde soronko bi fii w’adamfo pa bi hɔ? Ɛda adi sɛ anyɛ wo dɛ kɛkɛ na mmom ɛmaa w’ani gyei nso. Anyɛ hwee koraa no, akyɛde ma wuhu biribi fa onipa a ɔde kyɛ wo no ho—sɛ n’ani sɔ wo ne n’adamfofa no. Ɛda adi sɛ wokyerɛɛ w’adamfo no akyɛde no ho anisɔ.
2 Bible yɛ akyɛde a efi Onyankopɔn hɔ, na ɛyɛ akyɛde a yebetumi akyerɛ ho anisɔ ankasa. Saa nhoma a ɛda nsow yi ma yehu nneɛma bi a sɛ ɛnyɛ sɛ wɔaka ho asɛm wom a anka yɛrenhu da. Sɛ nhwɛso no, ɛka wim a nsoromma ahyɛ hɔ ma, asase, ne ɔbarima ne ɔbea a wodii kan bɔɔ wɔn no ho asɛm kyerɛ yɛn. Nnyinasosɛm a edi mũ a ɛbɛboa yɛn ma yɛagyina asetram nsɛnnennen ne dadwen ahorow ano wɔ Bible mu. Ɛkyerɛkyerɛ sɛnea Onyankopɔn bɛma n’atirimpɔw abam, na ɔde asetra pa aba asase so no mu. Hwɛ sɛnea Bible yɛ akyɛde a ɛma yenya anigye!
3. Dɛn na Bible a Yehowa de ama yɛn no ka fa no ho, na dɛn nti na eyi ka koma?
3 Bible yɛ akyɛde a ɛka koma nso, efisɛ ɛka biribi fa Ɔdemafo, Yehowa Nyankopɔn, ho. Nhoma a ɛte saa a ɔde ama yɛn no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ yehu no yiye. Nokwarem no, Bible betumi aboa wo ma woabɛn Yehowa.
4. Dɛn na w’ani gye ho wɔ Bible no kyekyɛ ho?
4 Nnipa pii na wɔwɔ Bible no bi. Wɔatintim Bible mũ no nyinaa anaa ne fã bi wɔ kasa bɛboro 2,300 mu, ma enti wiase nnipa bɛboro ɔha biara mu 90 na wobetumi anya bi. Sɛ wɔkyekyɛm pɛpɛɛpɛ a, wɔkyekyɛ Bible bɛboro ɔpepem biako dapɛn biara! Wɔatintim Bible mũ no nyinaa anaa ne fã bi ɔpepepem pii. Nokwarem no, nhoma biara nni hɔ a ɛte sɛ Bible.
“New World Translation of the Holy Scriptures” no wɔ kasa pii mu
5. Sɛ wɔka sɛ Bible fi “Onyankopɔn honhom mu” a, ɛkyerɛ dɛn?
5 Afei nso, Bible no “fi Nyankopɔn honhom mu.” (2 Timoteo 3:16) Ɔkwan bɛn so? Bible ankasa bua sɛ: “Nea efi Nyankopɔn hɔ na nnipa kae sɛnea honhom kronkron kaa wɔn no.” (2 Petro 1:21) Mfatoho bi ni: Adwumawura bi betumi ama ne kyerɛwfo akyerɛw krataa bi. Adwumawura no nsusuwii ne n’akwankyerɛ na ɛwɔ krataa no mu. Enti, ɛyɛ adwumawura no ankasa krataa, ɛnyɛ ɔkyerɛwfo no de. Saa ara na Onyankopɔn asɛm na ɛwɔ Bible mu, na ɛnyɛ nnipa a wɔkyerɛwee no de. Enti, Bible mũ no nyinaa yɛ “Onyankopɔn asɛm” ankasa.—1 Tesalonikafo 2:13.
EMU NSƐM HYIA PƐPƐƐPƐ
6, 7. Dɛn nti na Bible mu nsɛm a ehyia no yɛ nwonwa?
6 Bible no kyerɛw dii mfirihyia 1,600. N’akyerɛwfo no antra ase wɔ bere koro mu. Na ɛsono wɔn mu biara dibea a ɔwɔ wɔ asetra mu. Ná ebinom yɛ akuafo, mpataayifo, ne nguanhwɛfo. Ná afoforo yɛ adiyifo, atemmufo, ne ahemfo. Ná Asɛmpa kyerɛwfo Luka yɛ oduruyɛfo. Ɛmfa ho sɛ na ɛsono adwuma a na Bible akyerɛwfo no mu biara yɛ no, emu nsɛm no hyia fi mfiase kosi awiei. *
7 Bible mu nhoma a edi kan no ka sɛnea nnipa haw ahorow no fii ase kyerɛ yɛn. Nhoma a etwa to no kyerɛ sɛ asase nyinaa bɛyɛ paradise, anaasɛ turo. Bible afã nyinaa ka nsɛm a esisii wɔ mfirihyia mpempem pii mu ho asɛm, na emu biara boa ma yɛte ɔkwan a nea Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no bɛfa so anya mmamu no ase wɔ ɔkwan bi so. Sɛnea Bible mu nsɛm hyia no yɛ nwonwa, na saa ara na yɛhwɛ kwan sɛ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ no bɛyɛ.
8. Ma nhwɛso ahorow a ɛkyerɛ sɛ Bible ne nyansahu hyia.
8 Bible ne nyansahu hyia. Nsɛm bi mpo wom a na nnipa a wɔwɔ wiase saa bere a wɔkyerɛwee no nni ho nimdeɛ koraa. Sɛ nhwɛso no, wɔde ayarefo a woyi wɔn fi nnipa mu kogu baabi ne ahotew ho mmara maa tete Israelfo wɔ Leviticus nhoma no mu. Saa bere no na aman a atwa wɔn ho ahyia no nni nneɛma a ɛtete saa ho nimdeɛ koraa. Bere a na nkurɔfo kura asase yɛbea ho adwene a ɛnyɛ nokware no, Bible kaa ho asɛm sɛ ɛyɛ kontonkron, anaa kurukuruwa. (Yesaia 40:22) Bible kaa no pɛpɛɛpɛ sɛ asase ‘nsɛn biribiara so.’ (Hiob 26:7) Nokwarem no, Bible nyɛ nyansahu nhoma, nanso sɛ ɛka nyansahu ho asɛm a ɛka no pɛpɛɛpɛ. So ɛnyɛ eyi ne nea yɛhwɛ kwan sɛ yebehu wɔ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ mu?
9. (a) Akwan bɛn so na Bible da ne ho adi sɛ ɛyɛ abakɔsɛm nhoma a emu nsɛm yɛ nokware na yetumi de yɛn ho to so? (b) Dɛn na Bible akyerɛwfo no nokwaredi no ka kyerɛ wo wɔ Bible ho?
9 Bible ne abakɔsɛm nso hyia, na ɛyɛ nea yebetumi de yɛn ho ato so. Emu nsɛm no ka nneɛma pɔtee ho asɛm. Ɛnyɛ nnipa din nko na ɛbobɔ na mmom ɛkyerɛ abusua a nnipa no fi mu nso. * Ná Bible akyerɛwfo no yɛ anokwafo, wɔkaa wɔn ankasa ne wɔn man sintɔ ne nkogudi ho asɛm. Wiase abakɔsɛm akyerɛwfo nte saa, wɔntaa nka wɔn ankasa nkurɔfo nkogudi ho asɛm. Sɛ nhwɛso no, ɔkyerɛwfo Mose gyee ne mfomso a anibere wom a ɔyɛe a wɔkaa n’anim denneennen wɔ ho no toom wɔ Bible mu nhoma a ɛne Numeri no mu. (Numeri 20:2-12) Wɔntaa nhu nokwaredi a ɛte saa wɔ abakɔsɛm kyerɛwtohɔ afoforo mu, nanso yehu wɔ Bible mu efisɛ ɛyɛ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ.
NHOMA A MFASO WƆ SO
10. Dɛn nti na ɛnyɛ nwonwa sɛ Bible yɛ nhoma a mfaso wɔ so?
10 Esiane sɛ Bible fi Onyankopɔn honhom mu nti, “eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nneɛma ateɛteɛ.” (2 Timoteo 3:16) Yiw, Bible yɛ nhoma a mfaso wɔ so. Ɛma yehu sɛnea nnipa suban te ankasa. Ɛnyɛ nwonwa, efisɛ ne Kyerɛwfo, Yehowa Nyankopɔn, ne Ɔbɔadeɛ no! Ɔte yɛn nsusuwii ne yɛn nkate ase sen yɛn ankasa. Afei nso, Yehowa nim nea yehia a ɛbɛma yɛanya anigye. Onim asetra kwan a ɛnsɛ sɛ yɛfa so nso.
11, 12. (a) Nneɛma bɛn na Yesu kaa ho asɛm wɔ ne Bepɔw so Asɛnka no mu? (b) Nneɛma foforo a mfaso wɔ so bɛn na wɔaka ho asɛm wɔ Bible mu, na dɛn nti na afotu a ɛwom no yɛ adwuma bere nyinaa?
11 Susuw Yesu kasa a wɔfrɛ no Bepɔw so Asɛnka a ɛwɔ Mateo ti 5 kosi 7 no ho hwɛ. Wɔ nkyerɛkyerɛ a edi mũ yi mu no, Yesu kaa nneɛma pii ho asɛm a ebi ne sɛnea yebetumi anya anigye ankasa, sɛnea yebetumi asiesie yɛne afoforo ntam akasakasa, sɛnea yɛbɛbɔ mpae, ne sɛnea yebetumi anya ahonyade ho adwene pa. Yesu nsɛm no yɛ nea tumi wom na mfaso wɔ so nnɛ te sɛ nea na ɛte bere a ɔkae no ara pɛ.
12 Bible nnyinasosɛm bi fa abusua asetra, adwuma ho suban pa, ne yɛne afoforo ntam abusuabɔ ho. Nnyinasosɛm a ɛwɔ Bible mu fa nnipa nyinaa ho, na emu afotu so wɔ mfaso bere nyinaa. Onyankopɔn asɛm a ɔnam odiyifo Yesaia so kae no ka nyansa a ɛwɔ Bible mu ho asɛm tiawa sɛ: “Me [Yehowa, NW], wo Nyankopɔn, mene nea ɔkyerɛ wo nea eye ma wo.”—Yesaia 48:17.
Bible kyerɛwfo Yesaia hyɛɛ Babilon sɛe ho nkɔm
13. Nsɛm bɛn na Yehowa maa odiyifo Yesaia kyerɛw faa Babilon ho?
13 Nkɔmhyɛ pii wɔ Bible mu, na emu bebree anya mmamu dedaw. Susuw nhwɛso bi ho hwɛ. Yehowa nam odiyifo Yesaia a ɔtraa ase wɔ afeha a ɛto so awotwe A.Y.B. mu so hyɛɛ nkɔm sɛ wɔbɛsɛe Babilon kurow no. (Yesaia 13:19; 14:22, 23) Ɔkyerɛɛ ɔkwan pɔtee a wɔbɛfa so asɛe kurow no. Na asraafo a wɔrebɛsɛe kurow no bɛma Babilon kurow no asubɔnten no ayow, na wɔakɔ kurow no mu a obiara ne wɔn nko. Anso hɔ ara. Yesaia nkɔmhyɛ no bɔɔ ɔhene a na ɔbɛko adi Babilon so a ɔne Kores no mpo din.—Yesaia 44:27–45:2.
14, 15. Ɔkwan bɛn so na Yesaia nkɔmhyɛ a ɛfa Babilon ho no bi baa mu?
14 Bɛyɛ mfirihyia 200 akyi, wɔ October da a ɛto so 5, afe 539 A.Y.B. mu anadwo no, asraafo bi kɔbɔɔ nsra wɔ baabi a ɛbɛn Babilon. Hena na na ɔyɛ wɔn sahene? Persia hene bi a na ne din de Kores. Enti na bere adu sɛ nkɔmhyɛ bi a ɛyɛ nwonwa nya ne mmamu. Nanso, so na Kores asraafo no bɛfa Babilon a wɔrenko sɛnea na nkɔmhyɛ no aka ato hɔ no?
15 Na Babilonfo no redi afahyɛ bi saa anadwo no, na na wɔte nka sɛ esiane sɛ wɔato afasu atenten atwa wɔn kurow no ho ahyia nti wɔwɔ ahobammɔ. Saa bere no na Kores nam nyansakwan so redan asubɔnten a ɛsen fa kurow no mu no ani afa baabi foforo. Ankyɛ na nsu no yow maa wotumi faa mu kɔɔ kurow no afasu no ho. Nanso, na Kores asraafo no bɛyɛ dɛn ahyɛn Babilon kurow no mu? Biribi nti wɔantoto kurow no apon mu saa anadwo no!
16. (a) Dɛn na Yesaia kae sɛ awiei koraa no ɛbɛba Babilon so? (b) Nkɔm a Yesaia hyɛ faa Babilon sɛe ho no baa mu dɛn?
16 Wɔka faa Babilon ho sɛ: “Obi rentra mu da biara da, na obi renkɔtra hɔ, awo ntoatoaso a edidi so mu, na Arabiani bi rensi ntamadan hɔ, na nguanhwɛfo nso remma wɔn mmoa mmutuw hɔ.” (Yesaia 13:20) Ɛnyɛ kurow no sɛe nko ho asɛm na na ɛwɔ nkɔmhyɛ yi mu. Ɛdaa no adi sɛ na wɔrenkyekye Babilon bio. Asɛm yi mmamu ho adanse wɔ hɔ a wubetumi ahu. Tete Babilon amamfõ a efi Iraq ahenkurow Baghdad anafo fam kɔ hɔ yɛ kilomita 80 no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ asɛm a Yehowa nam Yesaia so kae no abam: “Mede ɔsɛe prae mapra no.”—Yesaia 14:22, 23. *
Babilon amamfõ so
17. Ɔkwan bɛn so na Bible nkɔmhyɛ a abam no hyɛ gyidi den?
17 Sɛ yesusuw sɛnea Bible yɛ nhoma a emu nkɔmhyɛ bam no ho a, ɛhyɛ yɛn gyidi den, ɛnte saa? Nokwasɛm ne sɛ, sɛ Yehowa Nyankopɔn ama nkɔm a ɔhyɛe wɔ bere bi a atwam no abam a, ɛnde ɛsɛ sɛ yenya ahotoso koraa sɛ ɔbɛma paradise asase ho bɔhyɛ no nso abam. (Numeri 23:19) Nokwarem no, yɛwɔ “ade a egyina daa nkwa anidaso a Onyankopɔn a ontumi nni atoro no ahyɛ ho bɔ fi teteete no so.”—Tito 1:2. *
18. Asɛm a tumi wom bɛn na Kristoni ɔsomafo Paulo ka faa “Onyankopɔn asɛm” ho?
18 Nsɛm a yɛasusuw ho wɔ saa ti yi mu da no adi pefee sɛ Bible yɛ nhoma a ɛda nsow ampa. Nanso, sɛnea ɛsom bo no sen emu nsɛm a ehyia, nyansahu ne abakɔsɛm a ɛne no hyia pɛpɛɛpɛ, mfaso a ɛwɔ so, ne emu nkɔmhyɛ a ɛbam no koraa. Kristoni ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: “Onyankopɔn asɛm wɔ nkwa, na tumi wɔ mu, na ano yɛ nnam sen nkrante anofanu biara, na etumi wura biribi mu kodu sɛ ɛpaapae ɔkra ne honhom, ne dompe ne emu hon mu, na etumi hu komam adwene ne nsusuwii.”—Hebrifo 4:12.
19, 20. (a) Ɔkwan bɛn so na Bible betumi aboa wo ma woahwehwɛ wo ho mu? (b) Wobɛyɛ dɛn atumi akyerɛ Onyankopɔn akyɛde a ɛda nsow a ɛne Bible no ho anisɔ?
19 Onyankopɔn “asɛm” a yɛbɛkenkan afi Bible mu no betumi asesa yɛn abrabɔ. Ebetumi aboa yɛn ma yɛahwehwɛ yɛn ho mu yiye paa. Ebia yɛka sɛ yɛdɔ Onyankopɔn, nanso sɛnea yɛyɛ yɛn ade wɔ nea N’asɛm Bible kyerɛkyerɛ ho no bɛma adwene a yekura ankasa, anaa nea ɛwɔ yɛn komam paa ada adi.
20 Bible yɛ nhoma a efi Onyankopɔn hɔ ampa. Ɛyɛ nhoma a ɛsɛ sɛ yɛkenkan, yesua, na yɛma yɛn ani gye ho. Kɔ so kenkan Onyankopɔn akyɛde yi mu nsɛm fa kyerɛ ho anisɔ. Bere a wokɔ so kenkan no, wobɛte nea enti a Onyankopɔn bɔɔ nnipa no ase yiye. Yebesusuw nea enti a wɔbɔɔ nnipa ne sɛnea saa botae no bɛbam no ho wɔ ti a edi hɔ no mu.
^ nky. 6 Ɛwom sɛ nnipa bi ka sɛ nsɛm a ɛwɔ Bible afã bi ne afã foforo nhyia de, nanso nsɛm a ɛtete saa a wɔka no nni nnyinaso. Hwɛ nhoma, The Bible—God’s Word or Man’s? (Bible—Onyankopɔn Asɛm Anaasɛ Nnipa Asɛm) a Yehowa Adansefo atintim no ti 7.
^ nky. 9 Sɛ nhwɛso no, hwɛ abusua a Yesu fi mu a wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ Luka 3:23-38 no.
^ nky. 16 Sɛ wopɛ Bible nkɔmhyɛ ho nsɛm pii a, hwɛ Amansan Nhoma, nhomawa a Yehowa Adansefo atintim no kratafa 27-9.
^ nky. 17 Babilon sɛe no yɛ Bible nkɔmhyɛ a abam no ho nhwɛso biako pɛ. Nhwɛso foforo bi ne Tiro ne Niniwe sɛe no. (Hesekiel 26:1-5; Sefania 2:13-15) Afei nso, Daniel nkɔmhyɛ no kaa wiase ahemman a na ebedi Babilon akyi aba no ho asɛm. Ebi ne Media ne Persia ne Hela. (Daniel 8:5-7, 20-22) Sɛ wopɛ Mesia no ho nkɔmhyɛ pii a enyaa mmamu wɔ Yesu Kristo so ho nkyerɛkyerɛmu a, hwɛ Nkekaho a ɛwɔ kratafa 199-201 no.
Bible yɛ Onyankopɔn asɛm ma enti ɛyɛ nokware na yebetumi de yɛn ho ato so.—2 Timoteo 3:16.
Onyankopɔn Asɛm so wɔ mfaso ma yɛn da biara da asetra.—Yesaia 48:17.
Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow a ɛwɔ Bible mu no bɛbam ɔkwan biara so.—Numeri 23:19.
Nneɛma a Yɛde Sua Ade
Bible​—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ (Ɔfã 1)
Share Share Bible—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ
bh ti 2 kr. 18-26